खर्च धान्न सरकारलाई धौधौ पर्दै, थप ऋण र वैदेशिक सहायता खोजिँदै…अ’र्थमन्त्री युवराज खतिवडा !
April 8, 2020 April 8, 2020 Daily News Nepal	0 Comments
सुवास निरौला : विश्वभरि देखिएको को’रोना भाइ’रसको सम’स्याले रा’ज्यलाई आ’र्थिक भार थपिने भएको छ । राज्य एक्लैले ख’र्च धा’न्न नसक्ने भएपछि सरकारले थप वैदेशिक सहा’यता लिने त’यारी गरेको छ ।पछिल्लो समय तीन दा’तृ नि’कायसँग सहा’यता लिने पक्का पक्की भएको अ’र्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्त’र्राष्ट्रि’य मु’द्रा को’ष (आएमएफ), वर्ल्ड बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिबी) सँग वैदेशिक स’हायता लिन लागिएको अ’र्थ मन्त्रालयका अन्त’र्राष्ट्रि’य आर्थि’क सहा’यता स’मन्वय महाशाखा प्र’मुख सह सचिब श्रीकृ’ष्ण नेपालले बताए ।
नेपालका अनुसार प्रति एक डलर १२० रुपैयाँका दरले एकसय ३९ मिलियन डलर स’हायता लिने प’क्का पक्की भएको हो। जसमा अ’न्तर्राष्ट्रिय मु’द्रा को’ष (आएमएफ) बाट ५० मिलियन, वर्ल्ड बैंक बाट ६० मिलियन र एशियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिबी) सँग २९ मिलियन डलर बराबरको वैदेशिक सहा’यता लिन लागिएको हो ।जुन १६ अर्ब ६८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । सरकारले उक्त रकम लिने अ’न्तिम नि’र्णय भईसकेको छ । यस बाहेक अन्य दा’तृ निकायसँग स’हयोगका लागि दैनिक जसो अ’र्थ मन्त्रालयले कुरा गरिरहेको जनाएको छ।
उसले एएआईडीसँग एक चर’णको छलफल गरिसकेको छ। महाशाखाले बहुप’क्षीय, द्वी’पक्षीय र दा’तृसं’स्थाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य, जलवायु, बार्षि’क बजेट र अन्य सबै क्षे’त्रलाई प्राथ’मिकतामा राखेर स’हयोग मागिरहेको नेपालले बताए। त्यसमा पनि बजेटलाई फोकस गरेर वैदेशिक सह’योग खोजिएको छ ।यतिबेला कति स’हयोग आउँछ यकिन भइसकेको छैन । ‘तर हाम्रो मुलुकले एक्सेस गर्न मिल्ने सबै वि’ण्डोहरूमा कुरा राखिरहेका छौ ’नेपालले भने। सदस्य भएको नाताले अ’न्तर्राष्ट्रि’य सं’स्थाहरूसँग दैनिक जसो सम्पर्क गरिरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
अन्त’र्राष्ट्रि’य सं’स्थाहरूका कन्ट्री डा’इरेक्टर, प्रतिनिधिहरू जोसँग सकिन्छ उनीहरूसँग हर सम्भ’व प्रयास भइरहेको नेपालले बताए। उनीहरूसँग भेट हुनसक्ने जतिलाई भेटेर र अन्यलाई टेली कनफ्रेन्स वा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट दैनिक कुरा भइरहेको नेपालले जान’कारी दिए ।दा’तृ नि’काय र सं’स्थाहरूसँग सबै को’णबाट कुरा भइरहेको छ । उनीहरूसँग पोलिसि मेजर्स, इको’नमीलाई स्ट्या’बल गर्ने विषय, व्यवसाय सु’चारु गर्ने विषय, रो’जगारहरूलाई नि’रन्तरता दिने विषय लगायतका कुरामा वा’र्ता भइरहेको नेपालले बताए। उनीहरूबाट सक्दो स’हयोग गर्ने प्रति’बद्धता आइरहेको नेपालले बताए ।
← दक्षिण कोरियामा निको भएकामा पनि फेरि देखियो को’रोनाको संक्र’मण..हेर्नुहोस् ।
राहत वितरणका झाँकी : एक डल्लो साबुन दिन यस्तो सकस..हेर्नुहोस् अन्य फोटो सहित!! →